Mayelana NATHI - Nanchang Hot Fashion Co., Ltd.
I-Hot Fashion Co, Ltd. esungulwe ngonyaka ka-2003 ibhizinisi elihlukahlukene elihlanganisa ukwakheka, ukuthuthukiswa kanye nokukhiqizwa kube ukuthunyelwa kwamanye amazwe kanye nokusebenza kwe-e-commerce. Le nkampani itholakala eNanchang City, esifundazweni saseJiangxi, eChina enenethiwekhi enkulu yezixhumanisi zokuhamba. Inamamitha-skwele angama-8250 esisekelo sokukhiqiza sanamuhla kanye nabasebenzi abangama-300.
Imfashini eshisayo iyaziwa emkhakheni wezingubo zemidlalo eChina. Futhi manje imikhiqizo yayo isungule ngempumelelo imakethe ye-United States of America, United Kingdom, Japan, Brazil kanye ne-European Union.
Uhla lomkhiqizo wayo lumboza amahembe, ama-polos, amasiketi afakwe izigqoko, amabhasikidi kanye namajezi ebhola likanobhutshuzwayo. Njengamanje, iHot Fashion inabasabalalisi abangama-60 emhlabeni jikelele futhi imikhiqizo yayo ithengiswa kuzingxenyekazi eziku-inthanethi ngaphakathi nakwamanye amazwe.
Imfashini eshisayo ingahlinzeka ngama-logo we-OEM ne-ODM namaphethini ngezindlela ezahlukahlukene njengokushiswa kokushisa, ukuphrinta kwesikrini, ukuphrinta kwe-sublimation, imifekethiso, ukuphrinta kwe-3D nokuningi.
I-Hot Fashion inoMklamo ophelele noMnyango Wezokukhiqiza nokuphrinta okwazi ukufeza ukusampula ezinsukwini ezingama-5 nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi kungakapheli izinsuku eziyi-15.
I-Hot Fashion ineqembu elizinikele ngemuva kokuthengisa elizonakekela amakhasimende alo.
Imfashini eshisayo izuze ukwethenjwa ngamakhasimende ayo eYurophu, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, e-Afrika nase-Asia ngekhwalithi yayo, isitayela nobungcweti obuhle kakhulu.
Lapha kwaHot Fashion, thina, ithimba elinomdlandla, siyakuthanda lokho esikwenzayo. Sinesifiso sokuvelela futhi sizinikele ekubekeni izinyathelo zethu kule nkathi yokuthenga online futhi sithole ukumaketha okubanzi kakhulu kwemakethe emhlabeni jikelele. Sazi kahle ukuthi indlela yokufinyelela le nhloso kuzoba ngamakhasimende futhi sifeza lokhu ngemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye nesevisi enhle yamakhasimende. Samukela ubuchwepheshe besimanje, ukuqeqeshwa kwabasebenzi kanye nemihlangano ejwayelekile nabanye ozakwabo embonini ngakho-ke sihlala sihamba phambili emisha futhi sigcina umqondo wethu wesitayela.